Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-football genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'El Mimo'. Ibali lethu le-Thierry Henry Childhood kunye ne-Untold Biography Facts kuletha iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Qalisa.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Minyaka yo kuqala
UHenry wazalwa ngokuzalwa 17 Agasti 1977 e-Les Ulis, e-Essonne isigxina saseParis nguyise, uAntoine Henry nonina, uMaryse Henry.
Bobabini abazali babefuduka. Uyise, u-Antoine, uvela eGuadeloupe (isiqithi saseLa Lasirade), kunye nonina, uMaryse, uvela eMartinique. Bobabini beza eFransi ukuphucula ubomi babo.
Intsapho kaHenry yayihlala kwindlu encinane kwaye izimo zokuphila azizange zixhase kodwa uAntoine wakhuthaza uHenry ukuba adlale imidlalo kwaye atyale amandla akhe kwiimidlalo. Wayethabatha ukuthatha uHenry kumdlalo webhola ekhatywayo. Ngokuqinisekileyo u-Thierry Henry waxhamla kunye nabanye abantwana basemzini wesithili sakhe ngokuqhubekayo kunye nokuphucula kwimidlalo yebhola.
Ngokukhawuleza kwacaca ukuba uHenry wayengumdlali ongcono webhola ekhatywayo kunabanye abantwana bakhe. Waqala ukudlala iqela elincinane laseLes Ulis nasePalaiseau. Ngeminyaka eyi-13, uHenry waqala ukudlala iqela le-Under-15 ye-Viry-Chatillon.
Amakhono akhe ayamangalisa ngokwaneleyo ukufumana indawo kwiqela le-CO Les Ulis 'yolutsha.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Ukuxhomekeka kwabazali
Kanye malunga nexesha apho uThierry Henry adinga khona abazali bakhe baninzi, kwenzeka into embi. Bobabini abazali bahlukana. Nguye unina owawunqobe umkhwa wokugcina ukugcinwa kwawo emva kokulwa amaninzi okugcina umntwana.
Unina wamthabatha ubaba wakhe kunye needolophu zakhe ezithandekayo e-Orsay apho wamvumela ukuba angene kwiSikolo sika-Alexander Fleming ukuba agxile kwizifundo. Ekubeni eyazi ukuba kwakungesilo ukubiza kwakhe, uTheory uHenry wakhupha emva koko. Watshintshela ekhatywayo.
Ku-14, wakhethwa kwiClairefontaine Academy yeFrench Football Federation.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -umsebenzi
Kwisikolo, uHenry wasayina isivumelwano somfundi kunye nomphathi weqela laseMonaco, u-Arsene Wenger. Wenza ubume bakhe bokuqala bebhola kwi-1994 kwi-2-0 ukulahlekelwa kweNice. Wabekwa kwiphiko lekhohlo nguWenger.
Kwi-1996, uHenry waba ngumdlali omncinci waseFrance wonyaka ophantsi kokukhokelwa kunye noqeqesho luka-Asene Wenger. Wahola iqela le-Under-18 laseFransi kwiYurophu yaseYurophu kwaye yafumana iinjongo ze-7 kwintsebenzo
Ngenxa yeziphumo zakhe ezintle nakwezinye iindwendwe, waba yingxenye yeFIFA yeFIFA yeHlabathi yeNdebe ye-1998 yeFIFA. Waqhubeka edlala uMonaco kwaye wahlaba umxhwele wonk 'ubani ngokusebenza kwakhe ngobuchule. Ufumene iinjongo ze-20 kwiimidlalo ze-105.
Kwi-1999, uHenry wasuka eMonaco waza waba yinxalenye ye-Italian Series A club Juventus. Wakhokhelwa isamba sezigidigidi ze-10.5 ukujoyina iqela. Ngomnyaka ofanayo, wazuza injongo yakhe yokuqala yeqela, ezimbini kwi-3-1 ukunqotshwa kweenkokheli zeLague.
Emva kwexesha elithile, wathunyelwa e-Arsenal ngesixa-mali se-11 million, kwaye apho wadibaniswa nomcebisi wakhe omdala u-Arsene Wenger. Abanye bathi bayimbali.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Ubudlelwane boBomi kunye noClaire Merry
U-Thierry Henry uhlangabeza isiNgesi umzekelo uClaire Merry ngelixa edlala ii-Renault Clio kwi-2001. Bobabini babethandana ekuqaleni. NgoJulayi 5th 2003, batshata kwi-Highclere Castle.
Babenomntwana wabo wokuqala, i-Tea, ngoMeyi 27th 2005. Ngoku ukhulile.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -I-£ 8m Divorce
Umdlali webhola u-Thierry Henry kunye nomculi ozenzayo uSadie Hewlett waqala ukuba nomhlobo emva kokuba basebenze umfanekiso wesithombe kunye. Umfazi kaHenry uClaire Merry ufumanisa ukuba umyeni wakhe wayekhohlisa, wafaka i-£ 8m settlement settlement ehamba ngayo. Umtshato osentlungu uvele emva kokuba u-Theirry Henry esanda kudluliselwa kwiFc Barcelona.
NgokukaHenry, "Umtshato awunakuze ulula, ngakumbi nangentombi phakathi". Umdlali waseArsenal owayedlulileyo, uthetha nothando lwakhe ngentombi yakhe iTe kwaye uthi ukuba nguyise wayencede ukutshintsha.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Ukufumana Uthando kwakhona
Emva kokuqhawula kwakhe umtshato, uTyerry Henry wathola uthando lokwenene kwakhona. Wanyuka ngokukhawuleza ukuba abe nolwalamano olutsha oluthi namhlanje luye lwahlala ixesha elide kunelo lokugqibela.
U-Thierry Henry wathola uthando kwakhona kwisibonelo saseBosnia u-Andrea Rajacic. Badibene kwi-2008 kwaye baye babonwa kwiiholide ezahlukeneyo kunye nokuphuma.
Ngokuqinisekileyo bayenza isibini esinqabileyo kwaye kubonakala kungekho nkathazo eparadesi. Omnye uyazibuza ukuba kutheni abo babini bengatshatanga okanye okanye ukuba ngaba isifundo sifunde phakathi kwazo. Kuyavunywa, namhlanje akukho mfuneko ethile yokubeka indandatho kuyo kwaye kutheni ukuchitha ubuhlobo obuhle kunye nomtshato? Ininzi yezibini eziziwayo zihlala zingatshatanga kwaye ziye zavuya kunye iminyaka emininzi.
Njengoko uTeerry ukhona kwaye wenza loo nto kwaye yajika yaba yinto engcolileyo, kubonakala ukuba iyaqondakala ukuba akafuni ukuyenza kwakhona.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Idol yakhe yebhola
I-NBA ihlelwe ngonxibelelwano olulodwa olulodwa phakathi kwe-Theirry Henry kunye ne-basketball legend Kobe Bryant, apho bobabini abadlali baxoxisana ngezithombe zabo zebhola.
Ukumangaliswa wonk 'ubani kubini abadlali bachaza igama leenkwenkwezi zaseDutch kunye ne-AC Milan legend, uMarco van Basten, obhekwa njengomnye wabadlali abakhulu bexesha lakhe.
"UMarco van Basten wayengumdlali endithandayo," watsho uHenry. "[Ungomnye wabadlali ababalaseleyo kwimbali. Ndambona xa ndisemncinci kwaye indlela awabetha ngayo ibhola yayingummangaliso. Ndazama ukumxelisa yonke into. "
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Injongo Yakhe yoThando
UHenry wathola ezinye iibhande zangempela ngexesha lakhe e-Arsenal. Umfokazi waseFransi ufumene iinjongo ze-228 ze-Gunners kwaye uyaqhubeka engundoqo kwiqela le-130 ye-XNUMX yeminyaka engabonakaliyo.
Nangona kunjalo, injongo yakhe ayithandayo yayingekho enye apho afumana khona i-volley ye-sensation okanye iqhube ngeqela elikhulu labadlali. Kuye esikhundleni salowo wawafumana ngokumelene neLeeds United emdlalweni wakhe wokuqala kwi-Arsenal shirt.
"Lowo wayeyimntu. Akuyi kuhlaselwa kwimbali yeNdebe ye-FA kodwa kwakungowokuqala ndifumene njengomtshati. "Uyazi, andizange ndenzelwe ukubuyela kwaye ndibuyele. Andizange ndenzelwe ukudlala, ndadlala. Andizange ndenzelwe ukufaka amanqaku, ndafaka. Kwakubuhlungu gqitha. Kwakungekho malunga nekhono okanye malunga namanqaku, oko kwakuthetha kum. "
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -I-Premier Favorite Premier League Player
Lo uya kuvuya kakhulu abalandeli baseManchester United. Ekhethekileyo Sky Sports, UHenry ubonise ukuba umdlali obalaseleyo oye wadlala nayo kwaye wabona kwi-Premier League ayikho enye i-United midfield legend, uPaul Scholes.
UHenry wathi uScholes akazange anikwe ikhredithi ayifaneleyo kwaye umgcini ophakathi wayebaluleke gqitha kwimpumelelo kaManchester United kwixesha likaFerguson. UmFrentshi wongezelela ukuba ukuba kufuneka akhethe iqela, laliza kuhamba ngeScholes.
"(Nguye) enye yezona zinto zingcono, ukuba andiyonto engcono kakhulu, ndiyidlale, angenza nantoni na." Ukuba ndibe noPaul Scholes kwikomiti yam, yonke into yayingakuye. EManchester United, babona njalo, kodwa ndicinga ukuba uPaul Scholes ungomnye wezona zinto zilungileyo kakhulu endidlalayo kulo mthetho, kwaye ndazibona naphi na. "
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Ukuthanda Ukutya
Nangona u-Arsene Wenger ephikelela ekudleni okunokulinganisela, ngokucacileyo, uHenry wayeza kuhamba ngendlela yakhe kwisiqingatha ipaketi ye-Jelly Babies phambi komdlalo ngamnye. Wayesoloko ebetha intloko kuqala.
Naphezu kokunyanzelisa kwakhe ukuqina, umFrentshi uyakuthanda ukukhwela kwi-Chicken, i-peas, ilayisi kunye neCaribbean yokutya.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Menzi wakhe
UTyerry Henry akazange agcine eArsenal ngendlela eqhelekileyo. Ukutshintshwa kwenzeka ngokwenene emva kwendibano yesikhala phakathi kukaWenger noHenry. Umdlali wemidlalo ubonakalise kwi-Arsenal Legends documentary, ukuba wahlangana no-Wenger ngephanya-moya eParis waza wabonisa umnqweno wokujoyina iArsenal.
Umphathi weArsenal wehla waya emsebenzini kwaye uHenry wayengumdlali weArsenal ngo-Agasti 1999.
Emva kokufudukela eJuventus, uHenry wayenzima ukulungelelanisa kwibhola le-Italy. Iinyanga ezine kwiindawo zakhe apho wadibana no-Arsene Wenger ngendiza eya eParis waza watshela umnkosi wakhe wangaphambili waseMonaco ukuba uyathanda ukumjoyina kwi-Gunners. Xa uNicolas Anelka wathengiswa kwi-Real Madrid ehlobo lase1999, uWenger wakhumbula ukuba intetho yahlawula i-Italian X £ i-10m. Yasebenza kakuhle.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Isiqhelo Sokulinganisa Ngaphambili
Ingcamango, kwintliwano-ndlebe ekhethekileyo Ezine ezine Mbini, wambonisa ukuba wayengenayo imigangatho emininzi ngaphambi komdlalo kwaye wayeza kuphulaphula kuphela umculo ophezulu we tempo rap okanye umculo weZouk ukuze amfumane kwindawo engaphambi komdlalo. Abanye bamagcisa akhe abathandayo UDkt Dre, uSnoop Dog, Xzibit, Wu-Tang Klan kunye noTupac.
Umculo uye waba yiyona nxalenye enkulu yamacebo omdlalo wokuqala kaHenry kwaye umdlali uyavuya kukuba abaqeqeshi nabaphathi baninzi kakhulu ngokusetyenziswa kwayo namhlanje.
"Kusebenza ngokungafaniyo kum ngenxa yokuba umculo uhlala ehlala ebomini bam - nayiphi na into endiyenzayo. Xa ndihlala endlwini yam, emotweni, ngaphandle nangapha. Umculo undibuyisela kwiindawo ezahlukeneyo. Ukuba ndifuna ukubuyela emva xa ndisemncinci kwaye ndibona ndidlala kunye noba ndiyazi kakuhle imvumi ukuphulaphula. Kwaye ndiyazi ukuba ngumculo owenza ntoni ukuze undibeke kumdlalo womdlalo. "
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Iingoma ezizithandayo
UHenry uhlale egxininise ukuba umculo yindlela yakhe yokungena kwindawo. Kodwa ingoma eyayisoloko kuluhlu lwadlalwayo yayingumKhosikazi 'SiyiNtlabathi'. UmFrentshi wembula ukuba uya kuhlala ephulaphule ingoma athi 'Andikho', kodwa xa iFransi iphumelele iNdebe yeHlabathi, yaqala ukudibanisa nengoma.
"Ndiya kuhlala ndikhumbula ukunqoba iNdebe yeHlabathi kwaye ndiphulaphule le ngoma - badibanise nam."
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Tatoo
U-Thierry Henry ngokuqinisekileyo ungumntu ophawulweyo owaziwayo ngokuthanda kwakhe iitato. Uye wambonisa itekisi egcweleyo yesandla esandleni sakhe sokunene, wongezelela ekusebenzeni kwakhe komzimba. Umnxeba udlalwa ngokuziphakamisa entendeni yesobunxele yendoda yesiginci eboshwe ngento ebonakala ngathi yintsimbi emnyama kunye neketeni legolide entanyeni yakhe.
I tattoo entsha ineza kwi-New York ethi bodyart bodyart ngakwesokunxele sayo.
Umboniso onengalo yasekhohlo yaseHenry ifaka iSitembu soKhuseleko kunye nebonakalayo yiBrooklyn Bridge.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -I-Fan enkulu yeBhola yeBhasiki
Ukuba ukholelwa ukuba uHenry wayengumdlali onobhola bebhola, ulahlekile. Umqhubi unalo, kuzo zonke izizathu ezicacileyo, ukungathandeki okukhulu kwi-Spurs xa kuza kwibhola, kodwa ngumtsalane omkhulu waseSan Antonio Spurs xa kuziwa kwibhaskball. Enyanisweni, uye wabonwa ngezihlandlo ezinikela isitya saseSan Antonio Spurs kunye nejezi.
U-Kobe Bryant waseLa Lakers (ngoku umhlala phantsi) kunye noTony Parker waseSan Antonio ngabadlali ababini uHenry ahlala ehlala naye. UmFrentshi uye wavakashela i-compatriot Parker ngexesha lokuqhuba iseshoni.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Iimviezo ezenzayo
Inzala kaHenry kwimiboniso yeefilimu ayigcinwanga kuphela ekubukeni kwesikrini esikhulu. Umdlali webhola waseFransi uye waba neenkwenkwezi ezimbalwa kwiifilimu. Ngaphandle kwe injongo Uchungechunge lwee-movie, umFrentshi uye wabonakala kuyo Entourage, i-movie version ye-TV eyaziwayo. Uye waba yinxalenye yamaxwebhu afana nawo Umpempe, umxhasi kunye no-1: 1 Thierry Henry, zonke ezisekelwe kwibhola ngenye indlela.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Ukuthanda Ukudansa
UHenry ulungile ezinyaweni zakhe, kungekhona nje xa kuziwa kwebhola, kodwa kumgangatho wokudanisa. Umdlali uye wabonisa ukuhamba kwakhe kwinqanaba lebhola kwiindlela ezahlukeneyo. UHenry uhambelana ngokupheleleyo nomdlalo weCarribean kwaye uthanda ukudansa.
Kwimbali yakhe, i-Lonely kwi-Top, umFrentshi wabonisa ukuba emva kweNdebe yeHlabathi kwi-1998, yena kunye nabanye abadlali baseFransi badlala ebusuku ngobunzima bomdaniso ngeHlabathi yeNdebe yeHlabathi phakathi koxa ephucula umdaniso omkhulu waseRashiya amanyathelo.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -Sakhe Isiqu
Iqela lebhola le-Arsenal leBhola namhlanje lihloniphe i-trio yeengqungquthela zeClubs ngokutyhila imifanekiso emithathu ngaphandle kwe-Emirates Stadium.
Into kaThierry Henry ikhunjulwe ngethusi. Oku kwenziwa kwimbhiyozo ye-125th ye-Arsenal.
Iindaba zeTerry Henry Childhood Plus Ingxelo ye-Untold Biography Facts -LifeBogger Ukwahlula
I-Florian Thauvin Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Steven Nzonzi Ibali leNtsana nge-Untold Biography Facts
UFranck Ribery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts